8 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Leedahay Lamaane Xun - Aayaha
Aayaha editorJune 9, 2020
Oohinta makaa dhamaatay sababtoo ah saaxiibkaa ma dabeecad xunyahay? Mar kasta ma dareentaa sida inaad mudantahay xiriir wanaagsan iyo dhaqankaas mid ka wanaagsna?
Waa inaadan sugin illaa uu kaa qiyaano kahor xiriirkaas jooji. Haddii saaxiibka uu lasoo baxo calaamadahan hoos ku xusan, waxaad si dhab ah u heysataa saaxiibka ugu xun dunida.
1. Mudnaan kuma siiyo
Waad ogtahay waxaad heysataa lamaane xun haddii uu maqnaado maalmo isagoo aanan kula soo xiriirin. Way ku adagtahay inuu waqti kuu helo.
2. Dareenkaaga dhib kuma haayo
Waad ogtahay waxaad si rasmi ah u heysataa saaxiibka ugu xun dunida haddii uu mar kasta u dhaqmo in dareenkaaga uusan dhib lahayn. Hal habeen ayaa laga yaabaa inuu si buuxda u shaqeeyo balse habeenada kale kuma riyooneysid.
3. Kuma qadariyo
Saaxiibkaa waa kan ugu xun dunida haddii uusan ku qadarin. Markaad kala hadasho qadarin la’aanta waxaa macquul ah inuu adiga eedeeyn kuu jeediyo.
4. Kuma daneeyo
Waad ogtahay waxaad heysataa ninka ugu xun dunida haddii ninkaaga uusan ku daneyneyn. Markii uu kula sheekeeysanaayo, sheekadiisa dhan waa jirka iyo galmo; si dhif ah ayuu uga hadlaa xirfaddaada, waxbarashadaada iyo waxyaabaha kale ee noloshaada muhiimka u ah.
5. Dhaqan liita
Waad ogtahay saaxiibka ugu xun dunida ayaa leedahay haddii uu ninkaaga dhaqankiisa liito ama dabeecad xunyahay. Qof kasta oo ku yaqaan ama xittaa qoyskaaga waxay ka hadlaan dhaqanka liita ee ninkaaga adigana waad ogtahay inay saxanyihiin.
6. Ma qaato masuuliyadda dhaqankiisa liito
Waxaad ogtahay inaad heysato saaxiibka ugu xun dunida haddii uu mar walba uu eedeeyo qof kasta
Balse uu isaga yahay mid dhaqan xun. Intii uu qaadan lahaa masuuliyadda dhaqan xumadiisa, waxa uu dusha ka saaraa dad kale oo maba qaato masuuliyadda dhaqankaas.
Waad ogtahay inaad heysatid saaxiibka ugu liita dunida haddii mar walba uu dantiisa iyo naftiisa bis ka fekero isla markaana uusan adiga kugu darin. Marnaba iskuma dayo inuu adigana kaa farxiyo.
8. Diyaar kuuma ahan markaad u baahantahay
Waad ogtahay inaad leedahay ninka ugu xun adduunka haddii ninkaaga uusan diyaar kuu ahayn markaad u baahantahay. Mar kasta waxa uu ku siiyaa raalli gelin qaldan oo ku aadan sababta uusan kuu caawin markaad caawintiisa u baahantahay.
Su’aalaha Gabdhuhu Ay Aadka Ujecelyihiin Inay Weydiiyaan Raggooda